Faah Faahin+Sawirro: Wasiir Lagu Dilay Weerarkii Ka Dhacay Saldhigga Waaberi.
Thursday June 22, 2017 - 20:23:16 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax xooggan oo maanta ka dhacay mid kamida waddooyinka ugu mashquulka badan magaalada caasimadda ah ee Mudisho.
Ugu yaraan 17 qof oo ay kamid yihiin saraakiil ciidan ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qaraxa ka dhacay saldhigga booliska degmada Waaberi.
Wasiir katirsanaa maamulka isku magacaabay ‘Jubbaland’ ee uu hoggaamiyo Axmed Madoobe ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay qaraxii maanta.
Max’med Awlibaax wuxuu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga maamulka ka jira magaalada Kismaayo, Awlibaax ayaa caan ku ahaa kusoo hoggaamintii ciidanka Itoobiya uu kusoo hoggaamiyay magaalooyin katirsan gobolka Gedo.
Awlibaax ayaa sanadihii 2011-illaa 2014 dal aqoon usoo ahaa ciidamada gumeysiga Itoobiya ee qabsaday magaalooyin ay kamid yihiin Luuq,Beled Xaawo,Baardheere iyo Garbahaarey wuxuuna xilligaas sheeganayay in uu yahay guddoomiyaha Ururka ‘Ahlusuna’ ee Gobolka Gedo.
Qaraxii maanta ka dhacay degmada Waaberi ayaa dhaliyay burbur xooggan waxaana muuqata in laamaha ammaanka DF-ka ay ku fashilmeen sugidda ammaanka wadada Makka oo kaabiga ku heysa saldhigga la weeraray.
Dalxiisayaal Faransiis ah oo lagu dilay wadanka Niger.